Rabitaanku waa sababta dhalashada iyo dhimashada, iyo dhimashada iyo dhalashada,
Laakiin nolosha dad badan ka dib, markii maanku ka adkaado damaca,
Rabitaan xor ah, is-ogaansho, Eebaha soo sara kacay wuxuu oran doonaa:
Waxaan ku dhashay uurkaaga oo ah dhimashada iyo gudcurka, waxaan jeclaan lahaa inaan ku biiro
Marti-qaadka aan dhiman karin.
Awoodda oo ay maanka bani’aadamka ku qasbaan, damacgu waa kan ugu xun, kan ugu khiyaanada badan, uguna khatarta badan, uguna daruuriga ah.
Marka maskaxdu marka ugu horeysa ee ay jidhku kadhigto waa argagaxsan tahay oo waa la diidayaa sida ay u egtahay rabitaanka, laakiin iyada oo la adeegsanayo iscasilaada ayaa noqota mid soo jiidasho leh, ilaa maskaxda ugu dambayntii la khiyaaneeyo oo loo dhinto illowsiisa iyada oo macangagteeda xasaasiga ah. Halistu waxay tahay in iyada oo loo maro damac iskii ah maskaxdu waxay la goyn kartaa damac ka dheer inta ay rabto, ama waxay dooran kartaa in ay isku tilmaamto, oo markaa dib ugu noqo mugdi iyo rabitaan. Waa lagama maarmaan in rabitaanku uu bixiyo iska caabin maskaxda, taas oo haddii lagu arko waxyaabaha khaldan ee maskaxdu iskeed isu ogaan doonto.
Rabitaanku waa tamarta hurdada maskaxda maskaxda. Iyada oo la adeegsanayo dhaqdhaqaaqa ugu horreeya ee maanka caalamiga ah, damacgu wuxuu kiciyaa firfircoonida jeermiska dhammaan waxyaalaha jira. Markuu taabto neefsashada damaca maskaxda ayaa laga toosiyaa xaaladdiisa jilicsan waxayna ku wareegsan tahay oo wax walba ku mashquushaa.
Rabitaanku waa indhoole iyo dhago la'aan. Ma dhadhamin karo, ma urin karo, mana taaban karto. In kasta oo rabitaanku uusan lahayn wax caqligal ah, haddana wuxuu adeegsanayaa dareenka si uu isugu adeego. In kastoo indha la 'yahay, waxay ku baxdaa isha, waxay soo jiidataa oo doonaysaa midabbo iyo qaabab kadib. In kasta oo dhago la ', waxay maqlaysaa oo ku cabirtaa dhegta dhexdeeda dhawaaqyada kiciya dareenka. Dhadhan la'aan, welina waa gaajaysan oo xayawaanka ayaa dhergin doona xayawaanka. Urta la’aan, wali sanka waxay ka neefsataa ur ururin ururinaysa rabitaankeeda.
Rabitaanku wuu jiraa dhammaan waxyaabaha jira, laakiin waxay ku timaadaa muuqaal buuxa oo dhammaystiran oo keliya iyadoo loo marayo qaab dhismeedka xayawaanka nool. Rabitaankuna waa la waafiqi karaa oo kaliya, la qarin karaa, laguna hagi karaa adeegsiga kan ka sarreeya xayawaanka inta uu ku sugan yahay xayawaanka waddankiisa ku yaal jidhka xoolaha.
Rabitaanku waa hawo aan la dafiri karin oo sababa imaatinka neefsashada joogtada ah iyo socda. Rabitaanku waa qulqulka qulqulaya oo nolosha oo dhan isu soo jiidi doona. Qaab la'aan, rabitaanku wuu galayaa oo wuxuu ku dhammeystiraa dhammaan foomamka xaaladdiisa weligeed is beddeleysa. Rabitaanku waa octopus-fadhi qoto dheer ku fadhiya xubnaha galmada; caqabadoodu waxay gaadhayaan jidadka dareenka ee badweynta nolosha oo waxay u adeegtaa baahiyaheeda aan waligood-qancin; waa ilko, olol, dab, waxay ku gubataa damacyadeedii iyo damacyadeedii, oo waxay kharribtaa damacyadii iyo himilooyinkii, oo ay wejigiisu indho sarcaadka u yahay Vampire, wuxuu ku soo jiitaa xoogagga jirka ee ay hilibkiisu ka muuqato, oo ka tago shakhsiyadda inay gubato Bannaanka hore ee ciidda adduunka. Rabitaanku waa awood indhoole ah oo wax xajiya, dib u dhigta oo dabagala, isla markaana waa geeri dhammaan dadka aan joogi karin jiritaankiisa, u beddelaan aqoon, una beddelayaan doonis. Rabitaanku waa qof xiiseeya oo ka fikiraya naftiisa oo ku qasbaya inuu siiyo heeso cusub oo loogu talagalay qoob ka ciyaarka dareenka, qaabab cusub iyo walxaha lahaanshaha, qoraalo cusub iyo dalabaadka si loo qanciyo rabitaanka cuntada iyo maskaxda maskaxda, iyo himilooyinka cusub ee lagu macaaneeyo shaqsi ahaaneed iyo u jeesanaysa isku-kalsoonaanteeda. Rabitaanku waa dulin ka soo baxda, waxna cunaysa, oo maskaxda wax ku cunaysa; Gelitaanka ficiladeeda oo dhan waxay dhalisay iftiin waxayna sababtay maskaxda inay u maleyso inay tahay mid aan la soo koobi karin ama lagu garto iteslf.
Laakiin rabitaanku waa xoogga keena dabeecadda in la soo saaro oo wax walba la soo bixiyo. Iyadoon la dooneynin labada jinsi waxay diidi doonaan inay isqabtaan oo ay soo saaraan nooca ay yihiin, iyo neefta iyo maskaxda ma sii ahaan karaan. iyadoon la dooneynin qaababka oo dhami waxay waayi doonaan xooggooda dabiiciga ah ee soo jiidashada leh, waxay u burburayaan siigada waxayna ku dhex shubaan hawada khafiifka ah, iyo nolosha iyo fikirka aan lahayn naqshadeyn ay ku sii daayaan oo ay ku qeyliyaan kuna beddelaan; Rabitaan la'aan nolosha uma jawaabi karo neefsashada iyo jeermiska iyo koriinka, oo aan haysanin wax ay ku shaqeyso fekerka ayaa joojin doonta shaqadeeda, wey joogsan doontaa ficil oo maskaxda ayey ka dhigeysaa mid madhan. Rabitaan la'aan iyada oo neefsigu uusan u horseedi doonin inuu wax muuqdo, adduunka iyo xiddigaha ayaa baabi'i doona oo ku soo noqon doona hal maaddo oo aasaasi ah, maskaxduna ma ogaatay inay lafteedu iskeed u kala horreyso kala diridda guud.
Maskaxdu waxay leedahay shaqsiyad laakiin rabitaanku ma laha. Maskaxda iyo damaca ayaa ka soo baxa isla xidid iyo walax, laakiin maskaxdu waa hal xilli horumarineed oo weyn ka hor damaca. Sababta oo ah rabitaanku sidaas waa laxiriira maskaxda waxa uuna leeyahay awood uu ku soo jiito, saameyn ku yeesho oo maskaxda kaga khiyaaneeyo aaminaada inay isku mid yihiin. Maskaxdu ma sameyn karto la'aan la'aan, damacuna ma yeelan karo maanka la'aan. Rabitaanka maskaxda laguma dili karo, laakiin maskaxdu waxay kor u qaadaa damaca hoose iyo kan sare. Rabitaanku horumar ma gaari karo la'aanteed xagga maskaxda, laakiin maskaxda ma ogaan karto lafteeda iyada oo aan la tijaabin damac. Waa waajibka maskaxda inay sare uqaado oo shaqsiyan damacdo, laakiin maadaama damacgu yahay mid jaahil ah oo indha la ', khiyaanadiisa ayaa maskaxda ku haysa maxbuus illaa maskaxdu ka dhex aragto khiyaanada oo ay ku adkaan doonto inay ka hortagto oo ka adkaato damaca. Aqoontaas oo ah maskaxdu kaliya uma aragto inay tahay mid ka duwan iyo sababta oo ah waxaa laga xoreeyay jaahilnimada rabitaanka xayawaanka, laakiin waxay sidoo kale bilaabeysaa xayawaanku habka caqliga iyo sidaa darteed kor uga soo qaado mugdigiisa galabta iftiinka aadanaha.
Rabitaanku waa marxalad dhaqdhaqaaqa miyir-qabka maandooriyaha madaama lagu neefsado nolosha oo uu ku kobco qaab jinsi ee ugu sareeya, halkaas oo lagu gaadho danaha rabitaanka. Adigoo ka fikiraya markaa wuxuu ka duwanaan karaa oo ka baxaa xayawaanka, kuna midoobi nafta nafta aadanaha, si caqli gal ah ula dhaqan awooda rabitaanka rabbaaniga ah sidaas darteedna ugu dambeyntii wuxuu Noqdaa Mid Kaliya.